အဖြစ်က ဒီလိုဗျ … ကျနော် မလေးရှားကို လေယာဉ်နဲ့သွားတုန်းကအိမ်သာတက်ချင်လို့ ကြည့်လိုက်တော့ယောကျာ်းလေးအိမ်သာက လူပြည့်နေတာဗျ…..ကျနော် မျက်နှာပျက်နေတာကို လေယာဉ်မယ်လေးက….တွေ့တော့ သနားပြီး အမျိုးသမီးအိမ်သာကို…အသုံးပြုခွင့် ပေးတယ်ဗျ……….””လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင့် တခုတော့ သတိပေးပါရစေ ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင် ရေလောင်းပြီးထွက်လာလိုက်ပါတခြားခလုတ်တွေကို ယောင်လို့မနှိပ်မိပါစေနဲ့ရှင်”” …….ကျနော်လဲ အမျိုးသမီးအိမ်သာကဘာတွေ ကွာခြားလို့လဲ တွေးပြီးဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်လိုက်တော့ ခလုတ် ၄ခု တွေ့လိုက်တယ်ဗျာ။
အိမ်သာတက်ပြီးတော့ ကျနော် အဲ့ဒီခလုတ် ၄ ခုရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို စမ်းကြည့်အုံးမှဘာဆိုပြီး အရင်ဆုံး WWဆိုတဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကိုရေပူတွေနဲ့ ဆေးပေးနေတယ်ခမျ…. အိုးးးး ဒိအဓိပ္ပါယ် warm water ပေါ့ great idea … ။
အဲ….ပြီးတော့ WA ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့ လေပူတွေ ထွက်လာတယ်ဗျာ…. wow …လန်းထှာ …WA ဆိုတော့ warm air ပေါ့..ဒါကြောင့် မိန်းခေးတွေ အိမ်သာတက်ရင် ..ကြာတာကိုးးး။
ထပ်ပြီးတော့ PP ဆိုတဲ့ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တော့…တို့ပတ်( powder puff)တခုထွက်လာပြီး..စောစောက အပူပေးအခြောက်ခံထားတဲ့…တင်သားတဝိုက်ကို ပေါင်ဒါနဲ့ ..တို့ပတ်ရိုက်ပေးပါလေရောဗျာ။..ကျနော် အံ့သြသွးတယ်ဗျာ…ဖာခ့်…….ငါတို့မိဘတွေက မျက်နာတို့ လည်ပင်းတို့မှာဘဲတို့ပေးတာ …ဒီမှာက မိန်းခေးတွေအတွက်…။ဒါနဲ့ပဲကျနော် နောက်ဆုံးတခုကို …အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီး..နှိပ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ….
အားးးးးးကျွန်တော့ရဲ့ အောက်ပိုင်းနားမှာ…စူးကနဲ ဖြစ်သွားတာကို…ခံစားလိုက်ရပြီး သတိလစ်သွားပါရောဗျာ။ သတိရလာတဲ့ အခါမှာတော့ ဆေးရုံကို ရောက်နေတာဗျ ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း အနားမှာရှိတဲ့ နပ်စ်မကို “ဒီမှာ …ဆရာမလေး” “ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲခင်မျ?”နပ်စ်မက .. “”ဒီလိုပါ လူကြီးမင်းရှင့် ” လူကြီးမင်းက ATR ကို နိပ်လိုက်လို့ပါ။ အဲ့ဒါက Automatic Tampon Removal ပါ။ အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တာက အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းတွေကို အော်တိုမက်တစ် ရှင်းပေးတာပါ။ လူကြီးမင်းက အဲဒီအခံ မရှိတော့ လူကြီးမင်းရဲ့ ဥနှစ်လုံးကို ဆွဲဖြုတ်သွားလို့အခုလို မေ့ပြီး ဆေးရုံရောက်လာတာပါရှင့် ..” “ဂိန်”
Previous Article ထိုင်ဝမ်ဟာယနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာခေတ်မီစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသ
Next Article ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားတပ်ချထားမှုသမ္မတ Putinကိုသမ္မတBidenသတိပေး